Nabadoon Goor dhawayd lagu Dilay Degmada kaaraan, waxa uuna ka mid ahaa ergadii soo xushay baarlamaankan waqtigu ka dhamaaday 10-aad. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Nabadoon Goor dhawayd lagu Dilay Degmada kaaraan, waxa uuna ka mid ahaa...
Nabadoon Goor dhawayd lagu Dilay Degmada kaaraan, waxa uuna ka mid ahaa ergadii soo xushay baarlamaankan waqtigu ka dhamaaday 10-aad.
Wararka ka imaanaya degmada Kaaraan ayaa sheegaya in goor dhawayd oo afurkii kadib lagu Dilay halkaas Nabadoon caan ahaa halkaas, kana mid aha ergadii afar sano ka hor soo xushay baarlamaankan waqtigu ka dhamaaday ee 10-aad.
Wararka ayaa sheegaya in Nabadoonka ay Toogteen Koox ku hubeysan Bastoolado, waxaana la sheegay in lagu dilay agagaarka masjidka Turkiga ee xaafadda Jamhuuriya oo ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir.
Sidoo kale Majirto cid weli sheegatay mas’uuliyada dilka Nabadoon Cabdullahi Hilowle, balse kooxda Al-Shabaab ayaa mudo dheer ugaarsi ku heysay odayaasha iyo ergadii soo dhisay baarlamaankan 10-aad ee Soomaaliya.
Previous articleWasaaradda gaashaandhigga dowlada Mareykanka oo soo jeedisay in Ciidamada laga saaro Liibiya.
Next articleBooliska Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo dibedbaxayaal isku dhacyo ku dhex maray magaalada Kinshasa
Mid ka mid ahaa garsoorayaashii dhageystay kiiska dacwadda badda Soomaaliya...
ames Richard Crawford oo ka mid ahaa garsoorayaashii dhageystay kiiska dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya ee Maxkamadda ICJ ayaa geeriyooday. Crawford, oo dhashay 14-kii November...
Ra iisal wasare Rooble oo Boqorka Soomaliya oo loo caleema saaray